Dowladda Hoose ee Muqdisho oo Burburisay Dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaab | SAHAN ONLINE
Dowladda Hoose ee Muqdisho oo Burburisay Dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaab
MUQDISHO –Duqa Caasimadda Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) ayaa amar ku bixiyay in la burburiyo dhismaha Piazza Libera ee Ceelgaabta, dhismahaasi oo uu sheegay in si sharci darro ah loo bixiyay, haddan lagu soo ceeliyay dan guud
Duqu wuxuu sheegay in bilowgii sanadkan la hakiyey dhismaha goobtan ka dibna u direy baaris rasmi ah. Iyadoo la fulinayo awaamiirta Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha ayuu Duqa Muqdisho maanta bixiyey amarkan burburinta.
“Markaan xilka qabtay ayaan hakinay dhismahan, ka dib baaris dheer waxaa soo baxday inaan si sharciga waafaqsan loo bixin dhulkaas, uuna ahaa yahayna weli mid dan guud. Sidoo kale markii aan la tashiyo la sameeyey Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha waxaan ku go’aaminey inaan dhulalka dawladda la bixin karin iyadoon loo marin nidaamka sharciga ah.” ayuu yiri Yariisow
Wuxuu sidoo kale u diray digniin dhammaan dadka degan dhulalkii danta guud sida Jardiinooyinkii iyo xarumaha dawladda inay sida ugu dhaqsiyaha badan u banneeyaan, ciddii awaamiirtan diidana sida tan oo kala loo burburin doono goob walba oo dhise sharci darro ah laga sameeyo.
Dhismaha la burburiyay dhulka laga dhisay waxaa bixiyay guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir, waxaana ka dhashay muran xoog leh oo la xiriiray qaabka loo bixiyay dhulkaasi, taasina waxay markii dambe keentay in xilka laga qaado guddoomiyihii hore Thaabit Cabdi.